Sidee lumisaa miisaanka 3 bilood?
Nafaqeeyayaalku waxay isku raaceen in aysan macquul ahayn in natiijooyin wanaagsan laga gaaro muddo gaaban. Kuwa doonaya in ay xaqiiq tahay in miisaanka lumiyo 3 bilood, jawaabtu waa mid raaxo leh, tanina waa xilliga ugu yar ee uu jidhku dib u habayn karo. Intaa waxaa dheer, miisaankani wuxuu waxyeello u geysan doonaa caafimaadka mana ka baqi doontid in lafuhu soo noqonayo, maadaama ay dhacdo marka la arko cunto dhafan oo adag.
Si loo gaaro natiijooyin wanaagsan, waxaanu soo jeedineynaa in la jebiyo dhammaan waqtiga loo qoondeeyey saddex marxaladood oo isku mid ah, xilli kastana wuxuu yeelanayaa jumladihiisa gaarka ah.
Bishii koowaad . Waxay ka bilaabataa iibsashada xasuusta miisaanka lumista, halkaas oo aad ku qori karto macluumaadka lagama maarmaanka ah iyo, dabcan, natiijooyinka. Waxa ugu muhiimsan waxay bedeleysaa mabaadii'da nafaqada. Raadinta, haddii ay macquul tahay in miisaanka lumiyo 3 bilood iyo sida loo gaaro natiijooyinka, waxaanu tixgelin doonaa sharciyada asaasiga ah ee dietetics:
Ka tirtir dufanka, macaan, macmacaan, iyo waxyaabo kale oo aan fiicneyn, inkastoo raashin, raashin.
Waxaa habboon in la beddelo cuntada kala qaybsan, cunto qaadasho, shan jeer maalintii. Tani waxay gacan ka geysan doontaa ilaalinta dheef-shiid kiimikaadka oo aan ka fekereynin gaajada. Cuntada ugu macquulsan quraacdu waa quraac, laakiin casho waa inaad doorataa alaabooyinka u fudud caloosha.
U hubso inaad ku darto khudaarta cagaaran ee khudradda cusub iyo khudradda oo hodan ku ah fiyuusiga, lagama maarmaanka u ah habka habboon ee habka dheef-shiidka.
Cuntada maalinlaha ah waa in la sameeyaa iyada oo la isticmaalayo alaab caafimaad leh: hilibka cuntada, kalluunka, alaabta laga helo burka qoyan, firileyda, badeecada caanaha iyo cagaarka.
Wixii cunto karisid, isticmaal wax karinta, dhejinta, dubista ama kariska wax lagu dubo ama la dubo.
U hubso in aad cabto biyo la nadiifiyey, sidaas awgeed sicirka maalinlaha ahi waa inuu ka yar yahay 1.5 litir. Intaa waxaa dheer, waxaad cabi kartaa casiirka dabiiciga ah, shaaha aan sonkorta lahayn, iyo sidoo kale infusions geedaha.
Toddobaadkiiba mar, waxaad isticmaali kartaa maalmo aan duulin, taas oo loogu talagalay nadiifinta jirka. Boorashka, kefir ama boorashka xayawaanka ah waxay ku haboon yihiin in la dejiyo.
Isticmaalida hababka loo yaqaan 'toll' si loo xisaabiyo qiimaha caloric maalinle ah, oo yaree qiimaha la helay 250 cutub. Waa in la ogaadaa in qiyaasta maalinlaha ahi aanay ka yarayn 1200 kcal.
U hubso inaad ku darto dhaqdhaqaaqa jirka oo waxa ugu wanaagsan in aad dareenka ka qaadato jimicsiga aerobic oo u oggolaanaya baruurta gubanaysa. Waxaa haboon in aad sameyso laba jeer toddobaadkii, kadib markaad xoogaa dhexdhexaad ah. Waad kari kartaa, boodi kartaa xadhig, raaci baaskiil ama dabaasha.
Bishii labaad . Si aad miisaanka u lumiso 25 kg 3 bilood, mar kale waa inaad yareysaa qiyaasta kalooriga ee cuntada, adoo ka qaadaya qiimaha 500 unug, laakiin xusuusnow mudnaanta lagama maarmaanka ah. Raac xeerarka nafaqada ee kor ku xusan.
Tababbar ahaan, waxaa lagu talinayaa in lagu daro laba fasal oo dheeraad ah oo leh xoogaa iftiin leh (qofku wuu heesi karaa), 30-60 daqiiqo.
Bishii saddexaad . Fahmida sida loola miisaanka yahay 3 bilood, waxaa haboon in la tilmaamo in laga bilaabo bishaan, xeerarka oo dhan, miisaanku wuu baxayaa kalsooni badan. Taasi waa sababta loogu taliyey in lagu daro laba tababareed oo isku xigxig ah oo tababarka adag ah si jadwalka jadwalka loogu talagalay 30 daqiiqo. Waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo mabda'a ah in jimicsiga lagu qabto saacad sare ilaa 30 ilbiriqsi, ka dibna, 90 ilbidhiqsi. marka la eego qiime dhimis wax walbana waa la soo celiyaa. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa tababarka xoogga, kaas oo kuu ogolaanaya inaad gasho muruqyada oo aad ka sameysid kabaha. Marka la eego nafaqada, markaa xeerarka oo idil waa in ay sii wadaan ixtiraamka, laakiin cabbirka kalooriga wakhtigan waa in la yareeyo 1200 kcal.
Dad badan ayaa xiiseynaya inta ay miisaanka dhuminayaan 3 bilood, markaa ma siin kartid qiimo sax ah. Nafaqeeyayaalku waxay yiraahdaan waa mid sax ah oo badbaado u leh jidhka inuu lumiyo 1-2 kg todobaadkii.
Cunto "Isticmaal" - liiska 14 maalmood
Cuntada Dr. Gavrilov
Maalmaha la sii daayo miisaanka ayaa ka yimaada caano fadhi
Diet Kovalkova - nafaqo ku habboon Kowalkov - saddex marxaladood
Cunto cunid ka sii daridda xanuunka caloosha
Maalinta nasashada ee bariiska - fursadaha ugu habboon
Cunto kariska boorashka
Cunto cunnooyinka dhiigga
Maalmaha la sii daayo miisaan lumis
Macnaha astaamaha xummada
Gidaarka iskood u sameysan ee derbiga ah
Amyloidosis - astaamaha
Tincture of peon
Barashada diinta ee carruurta da'da dugsiga ka horeysa
Sidee loo cunaa kaneecada?
Sida loo sameeyo maskaxda shaqeyneysa?
Tower of Rejepagic
Maxaad ka soo qaadataa Vladivostok?
Ninkan ka soo jeeda gabadha - cawaaqibka
16 argagax oo ah "caag" caag ah
Tabule - qajaar
Rybnik - Cuntada
Toonta ayaa hurda oo hurdi sariirta ku dhacda - maxaan samayn karaa?
Farxad-u-sheeg "Crown of Love"
Kaniisadda Maryaniga Virgin (La Paz)
Faytamiin noocee ah ayaa ku jirta basasha?
Sawirro leh saaxiibtinimo
Iyadoo aan lahayn surwaal, cirbado iyo qurxin: Kim Kardashian ayaa markii ugu horeysay ka soo baxsaday dhac
Wedding with Pitt ma u noqon Jolie munaasabadda ugu muhiimsan nolosha